INook ePortreath - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCornwalls Cottages
UCornwalls Cottages yi-Superhost
Indawo encinci yokuzimela entliziyweni yePortreath, umgama ongama-200m nje wokuhamba ukuya elunxwemeni. I-Dog-friendly, ixabiso elihle kwaye lilungele iveki yebhajethi okanye ikhefu elifutshane.
I-Nook yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukuya kwisanti yegolide kunye ne-surf emnandi yolwandle ePortreath kunye nokuqhuba okufutshane ukuya ePorthtowan. Ukuhamba-hamba kwiindlela zasemaphandleni kuyakusa kwindlela yonxweme enqumla emaphandleni amahle. Umzila womjikelo woNxweme ukuya eluNxwemeni ulandela indlela yetram endala yemigodi kwaye ikuse emazantsi kumlambo omhle e-Devoran - ukuqeshwa kwebhayisekile kufumaneka kwimizuzu nje embalwa kude kwi-Bike Barn. Isiseko esifanelekileyo sokukhenketha yonke iCornwall kunye nokufikeleleka kwi-A30, eyona ndlela iphambili ye-arterial etyhutyha idolophu, kuthetha ukuba izinto ezininzi ezinomtsalane ezifana neMount yaseSt Michael kunye neProjekthi ye-Eden kukumgama nje omfutshane. Ngorhatya ndwendwela ii-pubs ezininzi kunye neeresityu ezikufutshane.
I-cottage ngokwayo ibekwe ngasemva kweTregea Terrace kwaye iyibholthole encinci emnandi, kukho igumbi lokuhlala / lokutyela elihonjiswe ngokumnandi elinomabonakude kunye neWiFi engenamkhawulo edityaniswe nekhitshi elidibeneyo kunye negumbi lokulala eliphindwe kabini, iNook inobubele kwaye inja inokufikelela okumangalisayo kwindlela yonxweme. Ngaphandle yindawo ekhuselekileyo yokugcina iibhayisekile eyadini kunye netafile kunye nezitulo, zilungele ikofu yasekuseni.
Umgangatho ophantsi kuphela: Ngena kwigumbi lokuhlala / lokutyela elinetafile nezitulo, izihlalo ezitofotofo kunye neTV. Umnyango ukhokelela ekhitshini elineeyunithi ezifakelweyo kunye nezixhobo zombane. Omnye umnyango osuka kwigumbi lokuhlala ukhokelela kwi-4'6 "igumbi lokulala eliphindwe kabini elinendawo yokugcina kunye negumbi lokuhlambela eline-WC kunye nesitya sesandla /
Umphandle: Kukho indawo encinci yeyadi enetafile kunye nezitulo kunye nendawo yokugcina ibhayisekile / ibhodi.
Izibonelelo kunye neeNkonzo
Ukufudumeza kwenziwa ngeeradiyetha zombane. Ikhitshi linoluhlu lwezixhobo. Kukho i-oveni yombane kunye ne-hob, i-microwave, i-toaster, iketile, i-dishwasher edibeneyo yefriji kunye nesikhenkcisi. Indawo yokuhlala inomabonakude wedijithali wescreen esicaba. Kukho i-WiFi engenamkhawulo ekhoyo kwipropati. Kukho isixhobo sokomisa iinwele.
Umbane, ukufudumeza, ilinen yebhedi & iitawuli zonke zibandakanyiwe kodwa kuya kufuneka unikeze ezakho iitawuli zaselwandle. Izinja zamkelekile ngentlawulo encinci eyongezelelweyo &ponti;30 ngenja nganye ngeveki. Nceda uqaphele ukuba izinja azinakushiywa zingajongwanga kwipropati kulo naliphi na inqanaba. Iintsana ezisengalweni zamkelekile. Indawo yokupaka iyafumaneka endleleni. Ngelishwa, akuvumelekanga ukutshaya.
Ulwazi ngokuBhukha ngokubanzi
Ukufika / Ukuhamba ngokuqhelekileyo kungoLwesihlanu.
Ikhefu elifutshane liyafumaneka ngexesha elizolileyo.
& iponti;250 egunyaziswe kwangaphambili kwikhadi lakho letyala okanye ledebhithi njengedipozithi yokhuseleko iyafuneka.
IPortreath, emi kunxweme oluseMantla eCornwall, malunga neekhilomitha ezi-5 kumantla eRedruth, ekuqaleni yayiyilali encinci yokuloba kunye nenxalenye ebalulekileyo kumzi mveliso wemigodi waseCornish. Namhlanje yindawo entle yokurhoxa enezibuko elimxinwa, iilwandle ezifihlakeleyo zesanti kunye nomsinga obaleka ukuya elwandle kwelinye icala. Ilungele ukuqubha kunye nokusefa, ibukelwe yiSurf yasekhaya kunye neKlabhu egcina ubomi. IPortreath ibonelela ngolonwabo lolwandle kunye nelizwe elineembono ezintle, amawa amangalisayo kunye neendlela zokuhamba. I-Illogan Woods ikufuphi nePortreath enemilambo ethandekayo kunye nokuhamba okujikelezayo okukhokelela kwinqaba yecawa yenkulungwane ye-14 yase-Illogan. Kukwakho neTehidy Country Park ngaphandle nje kwePortreath kunye nebala legalufa elidibana nalo. Yipaki yelizwe entle equlathe iihektare ezingama-250 zemithi, amachibi, imiqanaba, iibhayisekile kunye neendlela zendalo. Kukho ichibi elihle elinamadada neentlobo ngeentlobo zeentaka zasemanzini. Ukuhlala kwindawo emangalisayo yentlambo kunye nolona lwandle lunomtsalane kunye noluhle kuNxweme lweAtlantiki, iPortreath ibitsala abatyeleli iminyaka ukuba bathathe ithuba kumgibe wayo wendalo welanga. Indawo entle kakhulu yeholide eya eCornwall enolwandle oluhle kwaye ikufutshane neendlela ezilungileyo zithetha ukuba unokujonga ngokulula indawo ejikelezileyo ngeentsuku ezingafanelekanga ukuhlala elunxwemeni.
IPorthtowan inelinye lawona maza abalaseleyo okusefa eCornwall. Ukuvelisa amaza amahle kuwo onke amazwe olwandle. Ayisiyoyabantliziyo zityhafileyo kwaye abaqalayo kufuneka balumke. Isikolo esisemagqabini sokusefa sisebenza ukusuka elunxwemeni. Ngamaza aphantsi, ulwandle lunwenwela ukuya eSt Agnes Head kunye neChapel Porth Beach apho uya kufumana iCafe ethandekayo yeNational Trust Cafe egcwele itshokolethi eshushu eshushu kunye neembono ezintle.
I-Gwithian kunye neHayle, ilawulwa ngummangaliso weemayile ezi-3 zesanti yegolide ezolulela emazantsi ukusuka eGwithian Towans naseGodrevy Lighthouse. Ulwandle oluhle kakhulu olunika amathuba okutshisa ilanga kunye nokusefa. Xa umoya uvuthuza, balumkele oomoya, ngakumbi kumaza akwisiphelo esisemantla sonxweme. Le yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokusefa umoya kweli lizwe. Kwidolophu yaseHayle, iParadise Park ihlala ithandwa ngabantu abadala kunye nabantwana ngengqokelela yabo emangalisayo yeentaka ezinqabileyo kunye nezilwanyana. Kukwakho nendawo yokudlala yangaphakathi elungele abantwana ukuba imozulu iba mbi!
I-St Ives, eyayisakuba yilali exakekileyo yokuloba, ngoku ixhomekeke kukhenketho njengeshishini layo eliphambili. UTurner weza wapeyinta imbonakalo-mhlaba ngo-1811 kwaye ubugcisa budlale indima kwimbali yaseSt Ives ukusukela ngoko. Kutshanje uBarbara Hepworth kunye noBernard Leach. Igalari yePenwith kunye neTate St Ives ibeke iSt Ives kwimephu yanamhlanje. Imyuziyam yaseBarbara Hepworth kunye neGadi yoMfanekiso yindawo emangalisayo yokundwendwela, kwaye kufanelekile nokuba awulilo igcisa elisakhasayo. I-Trewyn Studios apho wayehlala khona kwaye esebenza ukusuka ngo-1939 de wafa kabuhlungu ngo-1975 uye waguqulwa waba yimyuziyam emnandi, ebonisa uninzi lwemifanekiso eqingqiweyo ayithandayo kwigadi ephantsi kwetropiki, ngoku ilawulwa yiTate. Igalari yaseTate iSt Ives yakhiwa ngo-1993 kwindawo eyayisakuba yigasworks ibonisa imizobo eyahlukeneyo, imifanekiso eqingqiweyo kunye neeseramikhi.
Ukusuka ePenzance, unokuthatha iScillonian kuhambo losuku ukuya kwiZiqithi ezintle zaseScilly, kufanelekile ukutyelelwa ukuba awuzange ubekho. Imizuzu eli-10 phantsi kwendlela ilele iMarazion edume ngeSt Michaels Mount, ikhaya kwinqaba yamaxesha aphakathi kunye noluntu olusebenzayo lwasekhaya. I-St Michaels Mount iyafikeleleka ngendlela ehamba ngamaza aphantsi, okanye ngesikhephe. Inqaba iqeshiswe kwiTrasti yeSizwe lusapho lwase-St Aubyn oluhlala kwipropati egcina kwaye isebenze amabala.
Umbuki zindwendwe ngu- Cornwalls Cottages
Izimvo eziyi-3 108
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Portreath